सुन भन्दा महँगा वस्तु- विविधा - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २, २०७५ विमल निभा
काठमाडौँ — म कडा जाममा परेको छु ।महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थ महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय सवारी हुने भएको छ । त्यसैले यहाँदेखि त्यहाँसम्मका पुरै सडक जाम गराइएको छ । यसका साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि यही मार्ग भएर सवारी हुने भएका छन् क्यारे ! एक प्रकारले दोहोरो जामको विकट स्थिति छ ।
(यस्तै लागिरहेको छ, मलाई) । निकै समयदेखि बलात् रोकिएकाहरू सरकारी रवैयाप्रति क्रुद्ध रूपले अभिव्यक्त भइरहेका छन् । वातावरण तनावपूर्ण छ । एक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को उग्र (त्यसरी नै भन्नोस्) समर्थक भएको नाताले यो मलाई पटक्कै निको लागिरहेको छैन । यद्यपि म पनि जाममै अड्किएको छु । जे होस्, सरकार आफ्नै प्रिय पार्टीको हो । यसर्थ आइन्दा यस्तो अप्रिय स्थितिको सिर्जना नहोस् भनेर मेरो सरकारी नेता कमरेडहरूलाईएकाध विनम्र सुझाव ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई अत्यधिक मत प्रदान गरेर सरकारमा पठाउने नेपाली जनता हुन् । र यही जनतालाई कुनै पनि प्रकारले सकसमा पार्नु के बढिया हुन्छ ? चाहे त्यो यस्तो जाम–साम नै किन नहोस् ! (म पनि झन्डै पैँतालिस मिनेट भइसकेकोले आत्तिइसकेको छु, अब ता) । यस सन्दर्भमा मेरो पहिलो ठोस सुझाव के हो भने जम्मै कच्ची (अथवा पक्की पनि) सडक जनता–जनार्दनलाई नै एकलौटी रूपमा छाडिदिनु उम्दा हुनेछ । र आफ्नालागि भने सरकारी नेता कमरेडहरूले अलग्गै सडकको व्यवस्था गरे के हुन्छ ? यस्तो विशेष प्रचलन नभएको पनि होइन ।
उदाहरणका निम्ति अरबी मुलुकहरूलाई लिनोस् । तिनीहरूकहाँ शासक शेख–सामन्तहरूलाई भनेर छुट्टै आवागमनको शानदार प्रबन्ध गरिएको छ । तिनीहरू समानान्तर सडकमा आआफ्ना लेटेस्ट मोडलका सवारी साधनमा बेसरी हुइँकिन्छन् । (यहाँ बाहिरीलाई भने पूर्णतया निषेध) । यता नेपालमा पनि यस्तै भव्य खाले बन्दोबस्त गरे केही अशुभ हुने छैन । अपितुआफ्नैलागि निर्मित चिल्लो एवं सिमेन्टेड सडकमा सरर गुडेर हाम्रा महामहिम सम्माननीय र माननीयहरूले संसारकै धनधान्यले सम्पन्न शेख–सामन्तहरूका मद्य गौरव प्राप्त गर्नेछन् । र यसले थप लाभ के पनि हुनेछ भने सडक जाम नहुने परिस्थितिको सहज निर्माण भएर नेपाली जनता पनि आत्मैदेखि दंगदास हुनेछन् । अब नेता र जनता, दुवैथरी यसरी खुसी भए, अरु के चाहियो त ?
मेरो दोस्रो सुझाव के हो भने हाम्रा आदरणीय सरकारी नेता कमरेडहरूले यस प्रकारको भूमिमोह नगरेकै उपयुक्त हो । यस्तो भूमि–सुमिको क्षुद्र लालसा परित्याग गरेर सरासरी हवाइमार्ग अवलम्बन गरेमा के अन्यथा हुनेछ ? मेरो विचारमा त यही शत–प्रतिशत उचित हुन्छ । यसको स्वाभाविक परिणामस्वरुप तमाम जनता तल भूमिमै रहिरहन अभिशप्त हुनेछन् र नेताहरूचाहिंँ माथि–माथि आकाशमा । यही सर्वोच्च नेता–कमरेडहरूका सही स्थान होइन र ? वास्तवमा जनता र नेताहरूका मौलिक भेद पनि यहींबाट सुरु हुन्छ । यसो ता हाम्रा सरकारी नेता कमरेडहरूलाई विलकुलै भूमिमोह नभएको भन्ने पनि होइन ।
पहिले यिनीहरू कहाँ रहने गर्थे ? एक पटक याद गर्नोस्, भूमिगत रूपमा होइन र ? तर अहिले समय पूर्णतः परिवर्तित भएको छ । र अब पनि त्यही भूमिमा चपक्क टाँसिएर रहिरहनुको कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण हाम्रो सरकारी नेता कमरेडहरूले भूमिगत नभएर समग्रतामै आकाशगत अर्थात आकाश मार्गको यात्री हुनुपर्छ भन्ने मेरो निजी आग्रह हो । कृपया स्वीकार्य होस् । (यसले बेलाबखत भइरहने सडक जामको अन्त्य हुनु निश्चितप्रायः छ) ।
मेरो सुझाव नम्बर तीन वर्तमान सरकार सफलतापूर्वक हाँकिरहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीखड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग सोझै सम्बन्धित छ । उनी सरकार प्रमुखको गद्दीमा आसीन भएदेखि निरन्तर पानीजहाजको सर्वथा नवीन प्रसंग झिकिरहेका छन् । यही सिलसिलामा विधिवत् ‘पानीजहाज कार्यालय’को पनि स्थापना भइसकेको छ । तसर्थ जहिले पनि जाम–साम भइरहने मुला अलकत्रे सडकलाई चटक्कै छाडेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीले पानीजहाजमै यात्राको शुभारम्भ गरे कसो होला ?
यहाँ एउटा जब्बर प्रश्न उत्पन्न हुनसक्छ, पानीजहाजका लागि मनग्ये पानीको आवश्यकता हुन्छ । अर्थात् हामीसँग कुनै समुद्र खोइ ? तर यसले केही खास फरक पर्ने छैन । अहिले कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रधानमन्क्रीत्वमा सशत्त सरकार रहेको छ । के दुई तिहाइ हैसियतको सरकारले हामीकहाँ थोरबहुत समुद्र झिकाउन सक्दैन ? यो कमरेड प्रधानमन्त्री ओलीका लागि कुनै गारो–सारो कार्य होइन । यो एकदमै सम्भव छ । यसरी आयातित समुद्र मार्गबाट हाम्रा महामहिम, सम्माननीय र माननीयहरूले पानीजहाजमा सवार भएर यात्रारम्भ गरेमा बराबर भइरहने सडक जामको स्वतःनिर्मूलन हुनेछ ।
यस सम्बन्धमा मसँग अन्य मन्त्रणा (हाललाई मनमनै भए पनि) नभएको होइन । तर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय सवारी सुसम्पन्न भएर सडक पुरै खाली भएकोले म पनि आफ्नो बाटो लाग्छु । अरु राय–सल्लाह कुनै अर्को बखत !
प्रकाशित : चैत्र २, २०७५ ०८:०१